သောသီခို: သံလွင်မြစ်ပေါ်က ဟတ်ကြီးရေကာတာနှင့် KNU.
မတ် - ၁၀ - ၂၀၁၄
မြန်မာ-ထိုင်း-တရုတ် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ကြမဲ့ သံလွင်မြစ်ပေါ်က ဟတ်ကြီးရေကာတာစီမံကိန်းကို ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံ ဖာပွန်ခရိုင်က လက်ရိ်ှနိုင်ငံရေးအခြေအနေများအရ လုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကလယ်ဒို့ ကပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မြန်မာမီဒီယာသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာ သူတို့ခရိုင်ရဲ့သဘောထားရပ်တည်ချက်ကို အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ပဒိုစောကလယ်ဒို့ပြောတာက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဘာနိုင်ငံရေးအာမခံချက်မှ -မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုမျိုးကြီးကျယ်တဲ့ စီမံကိန်းကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူး-နိုင်ငံရေးအရ အာမခံချက်ရှိလာတဲ့နောက်မှဘဲ အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး-သူ့အကျိုးကိုယ့်အကျိုး ပြည်သူအကျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ လိုအပ်မှသာ စပြီးလုပ်ဆောင်သွားဘို့ သဘောထားရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး တစုံတရာမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ ဒီစီမံကိန်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ရင် လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရဘဲအကျိုးရှိမယ် ဒေသခံတွေကတော့ ဘာအကျိုးခံစားခွင့်မှရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဖြည့်စွက်ပြောဆိုခဲ့သလို-စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့တပ်မဟာနဲ့ခရိုင်ကို လာရောက်ညှိနှိုင်းတာ
ဒီဟတ်ကြီးရေကာတာစီမံကိန်းလုပ်မဲ့နေရာဟာ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲနဲ့ဖာပွန်
ဟတ်ကြီးရေကာတာစီမံကိန်းကို အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက အကောင်အထည်ဖော်ဘို့ရှိနေပေမဲ့ နယ်မြေဒေသငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက် ဒီကနေ့အထိ အလုပ်မဖြစ်သေးတဲ့ ရေကာတာစီမံကိန်းလို့ပြောရမှာပါ။
ဒီစီမံကိန်းကို လက်မခံတဲ့ ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာ KNU အပြင် DKBA
လည်းပါတယ်လို့သိရသလို- ဒေသခံတွေနဲ့အတူ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင် စောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တယ်လို့
ကရင်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်း- စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က စေဒေးဒေးကပြောပါတယ်။
အခုတင်ထားတဲ့ပုံတွေကတော့ ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းရေးမှူးပုံနဲ့ဘားအံမြို့နယ်အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ သံလွင်မြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
This isaright decision to do. Why do some of KNU leaders want to make some decision to negotiate with Thein Sein Government? Do not forget about why did KNU start to fight Burmese Government since 1949? It was not depend on Business, the main problem was the political only.
some of stupid , greedy and selfish leaders of knu want to have their benefit . it seems shameful to them ha ha. I would like to laugh loudly.
This isaright decision to do. we are not fighting for business. we are fighting for our Karen State Ind--